I-Rebahin Apk Download Mahhala ye-Android [IndoXXI] - Luso Gamer
Rebahin Apk Landa i-Android [IndoXXI]
September 23, 2021 September 22, 2021 by Shweta Tripathi
Sawubona abantu abakhuluma ulimi lwe-Bhasa, Uma usebenzisa i-smartphone yakho kakhulu ukuzijabulisa kunokuxhumana. Sikulethele uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu. Yaziwa njenge-Rebahin APK eyenzelwe amadivayisi we-Android. Landa manje.
Nge hlelo lokusebenza ungabuka imibukiso yakho oyithandayo, ama-movie, inkathi, nezinye eziningi. Ngokulanda lolu hlelo ku-smartphone noma kwigajethi yakho.
Ukufuna kwesifiso kokuqukethwe kokuzijabulisa ku-inthanethi sekuphele manje. Nge lensiza ungafinyelela ama-movie amaningi wakamuva, ahamba phambili, nama-movie adumile, i-anime, imibukiso ye-TV, khona manjalo.
Yini i-Rebahin APK?
Lolu uhlelo lokusebenza lokusakaza ividiyo lwe-android olwenzelwe abantu abakhuluma i-Bhasa. Idizayinelwe i-Indonesia ye-Indonesia lolu hlelo lokusebenza oluhle lunikeza ukufinyelela ezinhlotsheni eziningi zokuqukethwe kwe-multimedia eku-inthanethi ngaso leso sikhathi kwifoni yakho ephathekayo ye-Android.
Noma ungakhulumi ulimi, ukufinyelela kusenokwenzeka, njengawo wonke ama-movie nokuqukethwe kwevidiyo ngesiNgisi kunezihloko zesiNgisi. Uma izinto zaseHollywood, kunokuningi ongakuthola lapha.
Uhlelo lokusebenza liqukethe izinhlobo eziningi zokuqukethwe ezivela emhlabeni wonke. Lokho kufaka phakathi ama-movie, uchungechunge lwewebhu, amadrama, amasizini, amadokhumenti, nokuningi. Inokuqukethwe okuvela ezinhlotsheni ezahlukahlukene zabantu abanokuthanda okuhlukile.
Ngaphezu kwalezi zici ezimangazayo kunezici ezithile zohlelo lokusebenza okufanele uqaphele.
Okokuqala isiza siqukethe, ngaphezu kwezinye izinto, okucacile okungase kungalungeli abantu abangaphansi kweminyaka engu-18.
Okwesibili, kukhona okungekho emthethweni kanye ne-copyright emsamo nayo, engenza ukuthi ubhekane nemithetho yokwephula i-copyright kuye ngezwe ongena kulo.
Ngakho-ke cabanga ukusebenzisa lolu hlelo ngaphambi kokulufaka kufoni noma kudivayisi yakho ephathekayo. Noma kunjalo ilandwe izinkulungwane zezikhathi selokhu yethulwa ku-inthanethi.
Igama URebahin Apk
Usayizi 2.11 MB
Igama lephakheji com.isibonelo.rebahin
Iyadingeka i-Android I-4.0.3 ne-Up
Ungalanda kanjani uphinde ufake i-Rebahin Apk?
Ukulanda nokufaka ifayela le-Apk kulula kakhulu. Mane uqhafaze noma thepha kusixhumanisi esinikezwe ekugcineni kwalesi sihloko ukuze uqalise inqubo yokulanda. Lapho ifayili selikopishelwe ku-smartphone yakho ye-Android noma isiqondisi sedivayisi chofoza noma thepha kufayela ukuqala ukufakwa.
Into okufanele uhlale uyikhumbula ukuthi kumele uvumele ukufakwa kusuka emithonjeni engaziwa ukuthola uhlelo lokusebenza ocingweni lwakho lweselula. Ukuya kulungiselelo lezokuphepha bese uvumela izinhlelo zokusebenza ezivela kwimithombo engaziwa.
Bese uthola ifayela le-Apk bese uqhafaza ukufaka ifayela kwigajethi yakho ye-Android. Landela izinyathelo ezimbalwa ezisheshayo futhi lapho okhona.
Ungayisebenzisa kanjani iRebahin App ukubuka amavidiyo kuma-Smartphones?
Lapho uhlelo lokusebenza selufakiwe kudivayisi yakho. Vele uvule uhlelo lokusebenza ngokuthepha isithonjana esikrinini bese ukhetha kusuka kusigaba osithandayo ukubuka amavidiyo akho owathandayo.
Ungabuka futhi ama-movie online usebenzisa uhlelo lokusebenza, noma ukhethe okukodwa kwezinhlelo eziqondakalayo ngqo ekhasini lasekhaya noma ngokukhetha uhlobo.
Uma ufuna ukuthola ividiyo ethile, thepha kunketho yokusesha ukubheka i-movie yakho oyithandayo, umdlalo we-TV, noma isizini.
Ngohlelo lokusebenza kukhetho lakho leselula konke kungokwakho ukubuka noma yini oyifunayo.
I-Rebahin Apk uhlelo lokusebenza oluhle lokuthola okusha, okuhamba phambili nokuqukethwe odumile okuvela embonini yezokuzijabulisa. Ngokusebenzisa uhlelo lokusebenza ungabuka ngqo amafilimu, inkathi, noma imibukiso ye-TV kwifoni yakho ephathekayo.
Khetha uhlobo olusuka esikrinini sasekhaya noma useshe oyithandayo, izinketho ziningi. Noma kunjalo, okunye okuqukethwe kungaphathwa kubakhudlwana futhi kube yimidala ngokwemvelo kulungele lokho.
Jabulela izici ezinhle ngokulanda uhlelo lokusebenza kusixhumanisi esinikezwe ngezansi.
Izigaba Apps, Ezokuzijabulisa Amathegi URebahin Apk, Uhlelo lokusebenza lwe-Rebahin Imeyili kwemikhumbi
I-Decoder Kousei Idlala I-Apk Yokulanda Ye-Android [ML Hacks]
Ukulanda kwe-Macro YR Ye-Android [FF Hacks]